ပညာသင်ဆုများ - NLP - မာစတာ & ပါရဂူဘွဲ့
ပိုက်ဆံစဉ်းစားတွေးခေါ်စရာမလိုဘဲသုတေသန၏6နှစ်
ပြည်ပမှာမဟာသို့မဟုတ်ပါရဂူဘွဲ့လေ့လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အမေရိကတိုက်အတွက်လေ့လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? သဘာဝအလျောက်ဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့လေ့လာဖို့အဘယ်မှာရှိသနည်း ထိပ်တန်းဂျာနယ်များအတွက်သိပ္ပံနည်းကျဆောင်းပါးများထုတ်ဝေဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယ်မှာရှိမဟာသို့မဟုတ်ပါရဂူဘွဲ့များအတွက်ကောင်းသောပညာသင်ဆုရဖို့? အပြည့်အဝငွေကြေးထောက်ပံ့မဟာသို့မဟုတ်ပါရဂူဘွဲ့အနေအထားရှာဖွေနေပါသလား
(ဤစာသားကိုအလိုအလြောကျမှသင်၏အဆင်ပြေဘာသာပြန်ထားသောခံခဲ့ရသည် အင်္ဂလိပ်မူရင်း ။ ကျနော်တို့မဆိုအမှားများကိုတောင်းပန်။)
အဆိုပါ သဘာဝဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်းဓာတ်ခွဲခန်း ကွန်ပျူတာသုတေသနများအတွက်စင်တာ (၏ CIC အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Polytechnic Institute (၏) IPN), မက္ကစီကိုစီးတီး, မက္ကစီကို, တစ်စာတမ်းနှင့်အတူကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မဟာသို့မဟုတ်ပါရဂူဘွဲ့ဒီဂရီဝင်ငွေများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားပညာသင်ဆုတစ်ကန့်သတ်အရေအတွက်ကကမ်းလှမ်း သဘာဝဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်း၏ဧရိယာ။ (သူတို့ pass လျှင်, များသောအားဖြင့်သူတို့ကလုပ်ပေး) မဟာဘွဲ့ဝင်ငွေပြီးနောက်, ကျောင်းသားများပါရဂူဘွဲ့အဆင့်များအတွက်လျှောက်ထားရန်အားပေးအားမြှောက်နှင့်နေသောပညာသင်ဆုအညီတိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ခေါင်းစဉ်တို့ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်သဘာဝဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်း (NLP), ကွန်ပျူတာဘာသာဗေဒ (CL), လူ့ဘာသာစကားများ Technologies က (HLT), နှင့်ဆက်စပ်ဒေသများ၌ရှိသမျှသောဒေသများ, ကန့်သတ်မထားပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုပါ စာပမြေား နှင့် စောင်ကိုကာကွယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအကျိုးစီးပွား၏ဥပမာသည်။
ပညာသင်ဆု၏ငွေပမာဏ: အရှင်ဘုရားရဲ့ 600 အမေရိကန်ဒေါ်လာ, Ph.D: ခန့်မှာတစ်လလျှင် 800 အမေရိကန်ဒေါ်လာ (အားလပ်ရက်အပါအဝင်; ဤနေရာတွင် စပိန်အတွက်အချက်အလက် updated နိုင်ပါတယ်) ။ ဒါကသာမန်လူနေမှုအတွက်လုံလောက်သောထက်ပိုမိုနှင့်မက္ကစီကိုစီးတီးရှိအခန်းတခန်းငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပညာသင်ဆုတစ်ဦးချေးငွေမဟုတျပါဘူး: သင်ကပြန်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်မဟုတ်, (ထိုကဲ့သို့သောသင်ကြားမှုအကူအညီများကဲ့သို့) မျှဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါသည်။ ဤတွင်အကြှနျုပျ၏ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာသင်ဆုအကြောင်းကိုတင်ဆက် အိန္ဒိယအဘို့ပြင်ဆင် (အများဆုံးဖြစ်ကောင်းလည်း, သင့်ခရိုင်မှလျှောက်ထား) ။
Duration: အရှင်ဘုရားရဲ့:2နှစ်ကမှတက် (2.5 နှစ်များသောအားဖြင့်ရှည်ထုတ်), Ph.D:4နှစ်တက်။
အစီအစဉ်၏အမျိုးအစား: သုတေသန။ နှစ်ဦးစလုံးအစီအစဉ်များကိုသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနနှင့်ထုတ်ဝေဖို့ထက်သင့်ရဲ့ပရိုဂရမ်းမင်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေခြင်းမှ oriented နေကြသည်။
အလုပ်အကိုင်: ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်အကိုင်အများ၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များရှိပါတယ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ပါရဂူဘွဲ့ဘွဲ့ရအများစုဟာ, တက္ကသိုလ်များနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောရန်ပုံငွေသုတေသနအတွက်အသုံးချနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ MSc ကျောင်းသားများကိုပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါပါရဂူဘွဲ့အဆင့်အထိဆက်လက်; ဆက်လက်မပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သောသူတို့, တက္ကသိုလ်များသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးချနေကြသည်။
ဝန်ခံချက်: ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည် ဝန်ခံချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ဒါပေမယ့်အပေါ်ဖတ်ပါ; သင်ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်တူညီသော link ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့် CIC မှာလေ့လာ?
လက်မှတ်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါရဂူဘွဲ့နဲ့ Master ရဲ့အစီအစဉ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ထူးချွန်အစီအစဉ်ကိုအဖြစ်အစိုးရကအသိအမှတ်ပြုမက္ကဆီကိုအတွက်အလွန်အနည်းငယ်အစီအစဉ်များတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။
Elite: CIC အနေနဲ့အထက်တန်းလွှာသုတေသနစင်တာ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်ဦးဆောင်အမျိုးသားရေးသုတေသနစင်တာသည်။
အနာဂတ်: နီးပါးအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့၏ ပါရဂူဘွဲ့ဘွဲ့ရ ကောင်းသောတက္ကသိုလ်များအတွက်ကထိကသို့မဟုတ်သုတေသီများဖြစ်ကြအချို့နှင့်အတူ Post-ဒေါက်တာဘွဲ့ဒီဂရီ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာသူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်၏အရေးပါသောအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အောင်မြင်ပါပြီ မက္ကစီကိုအမျိုးသားသုတေသီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတော်များများဟာ မဟာဘွဲ့ရ ဘို့လေ့လာဖို့ဆက်ပြီး ပါရဂူဘွဲ့ဒီဂရီ, ကျွန်တော်တို့နှင့်ဥရောပထဲမှာတချို့နှင့်အတူအချို့ကိုဥပမာဗြိတိန်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်၌တည်၏။
အရည်အသွေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားအတော်များများလက်ခံရရှိ အရေးကြီးသောဆု; သူတို့ထဲကသုံးယောက်တစ်ဦးလက်ခံရရှိ ရွှေတံဆိပ်ဆု တိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏လက်မှတပင်ကိုလက်ခံရရှိ သည် Microsoft သုတေသနလက်တင်အမေရိက Fellowship ။
ဆက်သွယ်ရန်: ကျနော်တို့တက်ကြွစွာဥရောပ, အမေရိကန်, အာရှ, အာဖရိကနှင့်လက်တင်အမေရိကရှိအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း။
အခွင့်အလမ်းများကို: အများအပြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကူးမြောက် Intern များကို Microsoft က, Oracle က, Yahoo!, နှင့် Xerox မှာ။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များမှာ Intern များကိုများအတွက်ရန်ပုံငွေပေးပါ။
အနိုင်ရရှိမှု: ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုရှိသည်ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲအနိုင်ရ စနစ်များနှင့် algorithms ၏။
အကြံပေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါမောက္ခအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှိ ထုတ်ဝေစံချိန်, သိပ္ပံ၏မက္ကဆီကန်အကယ်ဒမီပညာရှင်များဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသားထူးချွန်အဆင့်ဆင့်3မက္ကဆီကို၏သုတေသီများက (အမြင့်ဆုံး) သို့မဟုတ်2(ဒုတိယအမြင့်ဆုံး), နှင့်လည်းအရေးကြီးသောဆုရရှိခဲ့ပါပြီ။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုညီလာခံ (ထိုအမျိုးသားရေးပိုင်နက်အပေါ်ပြည်တွင်းပြည်ပအချို့ကိစ္စ၌) မတက်ရောက်ဘို့အဖြစ်ငွေပေးချေမှုလိုအပ်ကြောင်းထိပ်တန်းဂျာနယ်များအတွက်ထုတ်ဝြေခင်းများအတွက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
လှုပ်ရှားမှုများ: ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုကဲ့သို့သောကြီးမားသည့်နိုင်ငံတကာကွန်ဖရ၏အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပါဝင်ဆောင်ရွက် CICLing သို့မဟုတ် MICAI နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဂုဏ်သတင်းဂျာနယ်များတည်းဖြတ်ကဲ့သို့သောအခြားအရေးကြီးသောလှုပ်ရှားမှုများအတွက်၎င်းတို့၏အကြံပေးကူညီ: CyS, IJCLA, POLIBITS ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်း၏ပါမောက္ခအယ်ဒီတာများ-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နေသော၏။
ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို: ကျနော်တို့ပါမောက္ခများနှင့်ကျောင်းသားတစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါရဂူဘွဲ့အစီအစဉ်မှပါမောက္ခများရှိပါတယ် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းရှိတယ်သို့မဟုတ်မှကျောင်းသားများရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါမောက္ခကြီးကြပ်လျက်ရှိသည်သို့မဟုတ်တွင်ဤကြီးကြပ်ပါပြီ ။
ဖော်ရွေလေထု: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါမောက္ခအထောက်အကူဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုဖော်ရွေပါ၏ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကောင်းသောအဆွေဖြစ်ကြ၏။
လတ်ြလပ်ခ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေဟာသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်; ငါတို့သည်သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့စသည်တို့ကို, တွင်လည်းရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်စာမေးပွဲတက်ရောက်ခြင်းအဖြစ်လစ်ဘရယ်များမှာ
ခရီးသွားလုပ်ငန်း: မက္ကစီကိုသမိုင်း, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝကြွယ်ဝသော, အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ သင့်အိမ်ရာအရပ်မှကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုဖို့လာကြ!
ထာဝရအနွေရာသီ: မြောက်ကိုရီးယားအတွက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင်းခဲ၏အလယ်၌, သင်နေနှင့်စွန်ပလွံပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အအေးနှင့်အနီးပါးဘယ်တော့မှလည်းပူဘယ်တော့မှမ။
ခိုင်မာတဲ့အကျိုးစီးပွား, Self-လှုံ့ဆျောမှု, လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်သုတေသနအတွက်လွတ်လပ်ရေး။
သငျသညျအကြံပြုသုတေသနခေါင်းစဉ်အဆိုအရအထူးသသဘာဝဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် related ဒေသများရှိသုတေသနအကျိုးစီးပွား။
ဝန်ခံတခါ, သင် program ကိုပြီးအောင်နှင့်ဒီဂရီခံယူရမယ်: program ကိုအပြီးသတ်ဖို့အကြွင်းမဲ့အာဏာပြဌာန်းခွင့်။
ပါရဂူဘွဲ့၏အမှု၌ထိုကဲ့သို့သော Python ကိုအဖြစ် programming language ကိုသင်ယူဖို့ဆန္ဒရှိအတူသက်ညှာနိုင်သော်လည်း programming သို့မဟုတ် scripting နည်းကျွမ်းကျင်မှု (လျှောက်လွှာအဆင့်အထိ), လိုအပ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောဘာသာစကားများ programming ဒေတာအဆောက်အဦများ, algorithms အဖြစ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏အခြေခံအချက်များနှင့်အတူကျွမ်း; programming ကိုနည်းစနစ်ကောင်းအသိပညာကြီးမားတဲ့ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်တန်းဂျာနယ်များအတွက်သိပ္ပံနည်းကျစာတမ်းများထုတ်ဝေရန်ဆန္ဒရှိ။ အရေးအသားနှင့်ထုတ်ဝေယဉ်ကျေးမှုဆည်းပူးဖို့လိုလိုလားလား။ ပါရဂူဘွဲ့များအတွက်ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI JCR-ရည်ညွှန်းဂျာနယ်များအတွက်ထုတ်ဝေကျောင်းဆင်းပွဲဘို့လိုအပ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောညီလာခံ၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုကူညီယေဘုယျအားဖြင့်ဆန္ဒရှိသကဲ့သို့, Lab မှများ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိ။
စပိန်သင်ယူဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်: ကကိုအလွန်ဒီနေရာမှာသင်၏အသက်တာကိုရိုးရှင်းလိမ့်မယ်။ ကြိုတင်မဲအတွက်စပိန်သိမှတ်ကြလော့မလိုအပ်ပါ။
သည်းခံခြင်း: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထား certified ရရှိထားပြီးဘာသာပြန်ချက်များကိုအပါအဝင်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာစာရွက်စာတမ်း, လိုအပ်နိုင်ပါသည်, etc
ကောင်းသောရမှတ်များနှင့်အတူယခင်ဒီဂရီပြီးဆုံး: အရှင်ဘုရားရဲ့အဘို့, BSc ဘွဲ့ပြီးဆုံး; ပါရဂူဘွဲ့များအတွက်, (ခိုင်ခံ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ BSc ဘွဲ့နှင့်အတူဝန်ခံစေခြင်းငှါသော်လည်း) မာစတာဘွဲ့ပြီးဆုံး။
: သင်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရှိသည်ဖို့ပိုနှစ်သက်သူတစ်ဦးပါမောက္ခကိုဆက်သွယ်ပါ လက်ဇန်းဒါး Gelbukh, Grigory Sidorov, Ildar Batyrshin, ဒါမှမဟုတ် ဟိရံ Calvo (; တစ်ပြိုင်နက်တင်ပြပယ်ချလိမ့်မည်တစ်ဦးတည်းသာရှေးခယျြ) ။ ပါဝင်သည်ပေးပါ:
သည်အခြားသက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေကိုအကြားသင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံထုတ်ဝေစံချိန် (ရှိပါက) နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု (ရှိပါက), နှင့်အတူ CV ကို။ ယခင်ဒီဂရီရဲ့လက်မှတ်နှင့်ရမှတ်မှတ်တမ်းချိတ်ဆက်ခြင်းအသုံးဝင်သောပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့်သင် NLP ၏ဧရိယာ၌အလုပ်လုပ်ချင်သလဲ? သင်သည်အဘယ်သို့အကြောင်းကိုသိလား, အဘယ်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများအတွက်သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံရှိသနည်း
အဘယ်ကြောင့်အထူးသငျသညျ CIC မှာလေ့လာချင်ပါသလဲ? သင်ကနေဘာမျှော်လင့်ထားလဲ?
သင်၏အကြံအစည်သင်ဘာဘွဲ့ရပြီးနောက်ရှိပါသလဲ သငျသညျမဟာလျှောက်ထားလျှင်ဥပမာ, သငျသညျပါရဂူဘွဲ့ကိုဆက်လက်စီစဉ်သလဲ?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာကြည့်ပါ ဆု စာမျက်နှာ; သင်တို့၏နာမပြီးအပေါ်သို့ပေါ်မှာထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်နည်း သင်မည်သို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေဂုဏ်ထူးနှင့်ဆုရတဲ့၏ဝေစုတိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီကြမည်နည်း
Topic: သင်သည်သင်၏စာတမ်းအဘို့မဆိုတိကျတဲ့စိတ်ကူးရှိသနည်း သို့ဆိုလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသေးစိတ်အချို့သည်ပေးပါ။ သုတေသနအဆိုပြုချက်နှင့်အတူသီးခြားစာရွက်စာတမ်းအထူးသဖြင့်ပါရဂူဘွဲ့များအတွက်, တစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သင်၌အားကြီးသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းအတည်ပြုလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါ၏ဖော်ပြချက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ ဝန်ခံချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (; MSc ဘို့ညွှန်ကြားချက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးလက်ရှိတွင်ငါအများအားဖြင့်ပါရဂူဘွဲ့အဆင့်ကရေးသားခဲ့သည်။) သံသယရှိလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
မေးခွန်းလွှာ: အလက်ဇန်းဒါး Gelbukh ။